Raw Stanozolol (Winstrol) vovoka Fambolena sy mpanome - Pabrika
Stanozolol (Winstrol) vovoka (10418-03-8) dia zava-mahadomelina tonga lafatra ho an'ireo izay maniry mafy ny hozatra mafy. Ny zava-mahadomelina dia nalaina am-bava tamin'ny famoahana cycles mba hanampiana ireo mpampiasa handratra na handoro fatin-doko.
Rohan Stanozolol (Winstrol) voly (10418-03-8) video
Rohan Stanozolol (Winstrol) voly (10418-03-8) Description
Stanozolol roja roapolo dia steroid anabolika ampiasaina mba hikolokolo sy henjana, ampiasaina amin'ny ankapobeny ho toy ny orin-tsakafo mandritra ny fihodinan'ny tsiranoka mba hahavery ny vatana. Tahaka ny vahindanitra amin'ny Dihydrotestosterone (DHT) izany, ka afaka manantena tombontsoa toy izany ianao raha toa ka tsy mety amin'ny STH hafa. Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, loharanom-pivoarana mora kokoa ho an'ny anavar izany, ary mazava ho azy, dia misy kokoa amin'ny tsena mainty. Noho ny fanovana ao amin'ny A-ring, dia steroid iray tsy manam-paharoa izany, ary manana fahaiza-manao tena miavaka. Izany no mahatonga ny vovobony Rw winstrol ho an'ny tsiranoka 3 ambony eo amin'ny tsena.
Rano Winstrol ny haran-koditra dia manana fahaizana manokana mba hampihenana ny habetsan'ny hormone-binding globulin (SHBG), mihoatra noho ny steroid hafa rehetra eny an-tsena. SHBG dia hormonina izay mifandray amin'ny steroids hafa ao amin'ny tsingerinao izay mahatonga azy ireo tsy misy ilàna azy; Amin'ny teny tsotra, dia mitondra tsy misy ilana azy ny steroids loatra raha tsy manala azy ireo. Na izany aza, ny poofa stanozolol roah dia mamela anao haka steroïde maromaro ao amin'ny tsingerinao raha tsy ilaina ny hampidina ny dosageo. Ny doka mahaliana dia Raw winstrol sy proviron, izay mamela ny fihenam-bidy SHBG farafahakeliny ary manatsara ny fahombiazan'ny fiovan'ny toetrandro.
Rohan Stanozolol (Winstrol) Pulver (10418-03-8) Specifications
Product Name Rohanina Stanozolol (Winstrol)
Anarana simika Winstrol, winny
Brand Name maro
molekiolan'ny Formula C21H32N2O
molekiolan'ny Wvalo 328.49
mitsonika Point 242 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Oral: Ora 9; IM: Ora 24 (aq. Tranga)
Solubility Malemy be rano (1 mg / ml). Vokatra amin'ny ethanol (24 mg / ml).
Application Ny steroid sasany no nataon'olombelona, ​​mitovy amin'ny fitsaboana testosterone natsangana. Ny poofa stanozolol ra dia ampiasaina amin'ny fikarakarana angioedema lova
Inona ny Rohan Stanozolol (Winstrol) (10418-03-8)?
Stanozolol (10418-03-8) dia hormonina anabolika hita ao amin'ny endrika dihydrotestosterone (DHT) nanorina azy. Ny fanavaozana ny fanorenana dia atao amin'ny hormone DTH mba hampihenana ny androgenicity amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny endriky ny anabolika izay mamela ny mpampiasa hahazoana ny hozatry ny leoparda ary hampitombo ny herin'ny vatana. Ny stanozolôl dia mivoaka amin'ny endrika am-bava sy manjavona izay midika fa raha tsy mahazo aina ianao amin'ny injections azonao atao amin'ny dosage am-bava. Ny zava-mahadomelina dia novolavolaina sy nivarotra teo ambanin'ny anarana Winstrol. Ny vokany dia mahatonga ny zava-mahadomelina ho laharam-pahamehana amin'ireo sokajy telo malaza indrindra eo amin'ireo mpanao biriky sy atleta matihanina. Ny Dianabol no steroid avoiding amin'ny famoahana vokatra tsara, Deca-Durabolin mandray ny toerana faharoa ary i Stanozolol dia mipetraka amin'ny toerana fahatelo.
Ahoana ny Rohan Stanozolol (Winstrol) (10418-03-8) asa
Stanozolôl (10418-03-8) dia zava-mahadomelina tonga lafatra ho an'ireo izay te hahazo mozika mafy sy mamy. Ny zava-mahadomelina dia nalaina am-bava tamin'ny famoahana cycles mba hanampiana ireo mpampiasa handratra na handoro fatin-doko. Araka ny efa voalaza alohan'io, ny zava-mahadomelina dia miara-miasa amin'ny steroids hafa amin'ny DHT. Maro amin'ireo atleta no mihevitra an'io steroid io ho safidy tsaratsara kokoa ho an'i Anavar ary koa ho fanampim-bavaka mora kokoa amin'ny fivarotana mainty hoditra. Ny fanovana A-ring dia mahatonga an'i Winstrol hanana steroid tsy manam-paharoa manana fahaiza-manao manapaka tsara. Tahaka ny ankamaroan'ny steroids mifandray amin'ny DTH, raha mampiasa Stanozolol ianao, dia tsy mila miahiahy momba ny fivoaran'ny zava-mahadomelina ao anatin'ny estrogen aorian'izany ao anaty vatanao. Misy ihany koa toe-javatra mampientanentana hafa momba ny Stanozolol izay tsy dia miresaka firy loatra ny olona, ​​ary ny fahafahany mampihena ny lopoproteins avo lenta (HDL) ary koa ny fitomboan'ny lipoproteins (LDL) ambany. Iray amin'ireo tombony Winstrol manan-danja izay ankafizin'ny mpampiasa maro mandritra sy aorian'ny famitana ny tsingerina. Na izany aza, ny HDL / LDL hatramin'izao dia tsy ampy ny fanohanana ara-tsiansa ary miankina amin'ny tatitra avy amin'ny porofo tsy azo antoka.
Stanozolol (Winstrol) roahina (10418-03-8) Dosage
Stanozolol dosage natolotr'ireo lehilahy dia avy amin'ny 40mgs ka hatramin'ny 100mgs isan'andro raha ny vehivavy dia tokony handray eo anelanelan'ny 5mgs sy 15 mgs isan'andro. Ho an'ny vehivavy izay te-handray dosie avo kokoa, dia tsy tokony hihoatra ny 20mgs isan'andro izy io, ary io dosage io dia soso-kevitra fotsiny ho an'ireo mpifankatia ara-panatanjahan-tena na mpahay sary. Ny fitenenana dosage mihoatra amin'ny vehivavy dia mety mitarika ho amin'ny fiantraikany mafy toy ny fampandrosoana ny hozatra lehibe sy malefaka toy ny lehilahy. Tsy misy vehivavy maniry hanana vatana tahaka ny lehilahy, ary izany dia mety hiteraka herisetra be loatra. Avelao ny dokotera hitarika anao amin'ny fomba hahazoana tsara ny zava-mahadomelina mba hahitana ny vokatra tsara mety hahafahanao manatsara ny asanao. Ny mpirotsaka Winstrol dia mila manomboka amin'ny dosia ambany izay azon'ny dokotera atao afaka manitsy azy any aoriana aorian'ny fanaraha-maso ny fandrosoana. Ho an'ny olona matanjaka, afaka mampiasa ny dosage fara-tampony Winstrol na miresaka amin'ny dokotera raha toa ka tsy mahatsapa ny vokany.
Rano Stanozolol (Winstrol) roahina (10418-03-8)
Ny fahatelo steroide anabolic steroide, ny tombotsoan'i Stanozolol dia miaraka amin'ny tombontsoa samihafa izay mahatonga ny zava-mahadomelina ho sarobidy ho an'ny atleta maro sy mpanao biriky. Araka ny voalazanay tetsy aloha, dia nampiasaina tamin'ny fampiasana tsimokaretina ny steroid mba ho fitsaboana ny angioedema herintaona sy ny osteoporose. Taorian'ny fahatsapana fa ny fanafody dia afaka manampy ny atleta sy ny mpandàla bodista hanatsara ny fahombiazany dia nanjary nalaza teo amin'ireo atleta elitika. Stanozolol dia manolotra tombontsoa maro ho an'ny mpampiasa azy, ary ireto manaraka ireto;
(1) Stanozolol dia tsy manova ny estrogen, ny ankamaroan'ny steroids anabolic rehefa miditra ao amin'ny vatana izy ireo dia mivadika haingana amin'ny estrogen. Na izany aza, Winstrol dia miseho ho anisan'ireo steroids vitsivitsy anabolika izay tsy miova amin'ny estrogen. Estrogen dia manolotra fiantraikany ratsy eo amin'ny lehilahy toy ny fampiroboroboana ny nono. Noho izany, tsy manana antony tokony hanahirana anao ianao rehefa mitondra ity steroid mahagaga ity.
(2) Manampy ireo mpampiasa hampivelatra ny hozatry ny kalitao, ny fahaizan'i Winstrol hanolotra fanamafisana ny hatsaran'ny kalitaon'ny mpampiasa dia mety ho antony lehibe iray mahatonga ny atleta sy ny mpandam-bolo maro maniry azy io. Tsy toy ny steroid hafa anabolika izay manatsara ny haben'ny hozatra ihany koa, ny Stanozolol koa dia manatsara ny hery misitery. Rehefa mihinana sy mifantoka amin'ny tsingerina ny diabeta, dia afaka mivoatra haingana mafy, mafy sy mendri-kibo tsara ianao. Raha liana amin'ny fanorenana ny hozanao ianao, dia manana safidy tsara ho anao i Winstrol.
(3) Ny steroid dia tsy miteraka fitehirizana rano izay mahatonga azy ho tsara ho an'ny atleta maro mpandoro basy. Ny ankamaroan'ny tsimok'aretina eo an-tsena ankehitriny dia mitarika amin'ny fitazonana ny rano amin'ny hozatra mandà ny mpampiasa hahatratra ny hozatry ny hatoka sy ny tenda. Rehefa manohy ny dianao mankany amin'ny fanorenana misitery ianao dia tsy mila manahy momba ny fitehirizana rano amin'ny fampiasana Stanozolol.
(4) Winstrol dia manome ny mpampiasa azy ny fahafahana misafidy ny fomba tiany hampiasana azy satria izy io dia misy amin'ny endrika am-bava sy amin'ny endriny. Maro ny olona matahotra ny miteraka noho ny fanaintainana, saingy i Stanozolol dia manome fahafahana anao hankafy ny tombontsoa raha tsy misy ny fanjaitra. Ny fanafody am-bava dia misy amin'ny pilina sy ny rano. Ny dokotera dia ahafahanao misafidy ny endri-dainao tianao indrindra. Rehefa mipetraka amin'ny Winstrol mipetrapetraka ianao, dia ataovy izay hahatonga ny dokotera na ny dokotera hanome ny dosages rehetra. Aza manao fahadisoana amin'ny fanindronana anao raha tsy manam-pahaizana ianao.
(5) Tombontsoa iray manan-danja hafa izay mahafinaritra an'ireo mpampiasa mandritra ny vanim-potoana haingana sy haavo ny cybercurrent Stanozolol. Ny steroïde maro dia maka fotoana vao mahita ilay vokatra feno. Na izany aza, tsy mitranga izany rehefa mandray an'i Winstrol ianao, amin'ny fotoana hamitanao ny tsingerina voalohany, dia hahita sy hahita ny vokatra ianao. Ny fisafidianana ny sakafo ara-dalàna sy ny fihazonana ny tsingerina miaraka amin'ny fanatanjahan-tena, dia hahazo ny vokatra ianao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Araho ireo torolalana rehetra voatanisa ary ampidiro amin'ny dokotera amin'ny fomba rehetra ny vokatra tsara sy haingana.
Buy Stanozolol (Winstrol) vovoka avy amin'ny Buyaas.com
Ny toro-làlana farany ho an'ny stanozolol (Winstrol) ho an'ny fitomboan'ny taova
Spadari, A., Romagnoli, N., Predieri, PG, Borghetti, P., Cantoni, AM, & Corradi, A. (2013). Ny fiantraikany amin'ny fitsaboana tsy misy fitsaboana amin'ny stanozolol amin'ny tranon-tsolika sinovial sy cartilage amin'ny modelin'ny karazana osteoarthritis. Fikarohana momba ny siansa veterinary, 94(3), 379-387.
Solbach, P., Potthoff, A., Raatschen, HJ, Soudah, B., Lehmann, U., Schneider, A. & Vogel, A. (2015). Ny testosterone-receptor dia hepatocellular carcinoma tsara ao amin'ny 29 taona bodibondry fahiny miaraka amin'ny tantaran'ny fanararaotana anabolika anabolika an-keriny: raharaha iray. BMC gastroenterology, 15(1), 60.
Milhorn, HT (2018). Anabolic Steroid Dependence. In Manararaotra ny aretina(p. 179-185). Springer, Cham.
Choi, SM, & Lee, BM (2015). Ny fanombanana ny fiarovana amin'ny fiarovana amin'ny sela mpanindrahindra sy ny anabolic androgenic. Hevitra momba ny fisotroan-dronono, 14(11), 1773-1785.